Cabdiweli: Warqadda Wasiirada ima soo gaarin - BBC Somali
Cabdiweli: Warqadda Wasiirada ima soo gaarin
17 Nofembar 2014
Image caption Khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisalwasaaraha ayaa muddo soo jiitamayay
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa sheegay in aanu helin wax warqad ah oo ay u soo gudbiyeen wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa.
Ugu yaraan 14 wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, ayaa ugu baaqay inuu iscasilo ra'iisul wasaaraha.
Hasayeeshee, Ra’iisul Wasaare Cabdiweli, ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Wasiir ka tirsan xukuumadiisa uu sheegay in 14 wasiir ay usoo gudbiyeen warqad ay kaga dalbanayaan inuu is casilo, taasi oo ah buu yiri mid aan isaga soo gaarin.
Ra’iisul Wasaare, Cabdiweli Sheekh Axmed, waxaa uu ugu baaqay xubnaha golaha wasiirada inay u gutaan shaqadooda si waafaqsan dastuurka dalka.
Waxa uu intaasi ku daray in uusan aqbali doonin wax allaale iyo wixii ka soo horjeeda Dastuurka iyo sharciyada dalka u yaalla.
Ra’iisul Wasaaraha, ayaa uga digay xubnaha golahiisa inay noqdaan gacmhii loo adeegsan lahaa burburinta sharciga iyo dowladnimada, balse uu diyaar u yahay in uu aqbalo wasiirkii doonaya inuu is casilo.